Singa vaovao hita tsy ho ela dia hanazava ny fahafatesan'i Victorine
Na ankehitriny aza dia manao izay ho afany ny zandary hampijanona ny mpamono olona an'i Victorine. Nanamarika fa ny fatiny tsy manana aina dia hita ny alatsinainy lasa teo tao amin'ny riaka iray any Villefontaine (Isère).
Mbola manandrana manaraka ny làlana azo inoana rehetra ny manampahefana ary mahatakatra ny tena toe-javatra nahafatesany. Noho izany, singa vaovao amin'ny tranga mety hanodina ny zava-drehetra.
Ny fahafatesan'i Victorine, alika polisy dia manazava ny raharaha
Raha ny angom-baovao avy any Dauphiné Libéré, dia nanohy ny fikarohana azy ireo ny naman'ny Fiangonana tao amin'ny Grenoble Research Section ny talata teo tao amin'ny tanànan'i Saint-Bonnet any Roche. Araka izany, nandritra ireo fanadihadiana ireo dia alika polisy no tokony hanana toetra somary nahagaga. Eny tokoa, "nijanona ny alikan'ny zandary" manoloana ny iray amin'ireo fitoeram-pako telo.
VAKIO IHANY: Vaovao ratsy fotsiny no nanaloka ny fianakavian'i Brigitte Macron
Eny tokoa, avy hatrany dia nanakodia tamin'ny tany izy, ny efatra rehetra dia teny amin'ny habakabaka araka ny filazan'ny mpifanila vodirindrina iray izay teo. Fihetsika izay mbola tsy fantatra ny antony. Na izany aza, nangataka kamio SMND ny mpanadihady mba hanala ilay kaontenera. Ny ao anatiny dia tokony ho dinihina amin'ny antsipiriany. Taorian'ireny fisehoan-javatra ireny dia nanao fanambarana ampahibemaso ny mpisolovava an'ny fianakavian'i Victorine Dartois.
Tsy ela dia nanazava ny raharaha Victorine
Ny fianakavian'i Victorine dia te hahalala bebe kokoa momba ny toe-javatra nahafatesan'ilay zazavavy kely. Te hahafantatra ny fandehan'ny raharaha izy. Taiza ary nahoana no nahasarika an'io mpianatra io ireo olona ireo na ity olona ity. Ary raha ny filazan'ny mpisolovava ao amin'ny fianakaviana dia mbola tsy voafehy ny lalan'ny herisetra ara-nofo raha tsy vita ny fizaham-pahasalamana be dia be. Zavatra iray izay miteraka ahiahy eo amin'ny fianakaviana sy ny fianakavian'i Victorine. Saingy irian'izy ireo amin'ny fony manontolo ny fiheveran-tena ho ratsy dia ratsy.
Nanendry ny filohan'ny César i Vanessa Paradis - Lahatsary
⛔️URGENT - FITSANGANANA I DJ ARAFAT NY MPITSITRA MITSANGATRA TINA GLAMOR HITSIPIKA SY hampiditra ahy - Video